Archive du 20200310
Famoahana ny marina Tompon'andraikitra maro no hanaradia an'i Thierry CENI…
Mbola miteraka adihevitra etsy sy eroa ny famoahana ny marina momba ny lisi-pifidianana nataon'i Thierry Rakotonarivo.
Toe-draharaham-pirenena Hiditra amin`ny krizy ateraky ny fifidianana ?
Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena raha ny zava-misy ankehitriny. Miakatra ny maripana eo amin`ny tontolo politika. Mifampiandry ny mpitondra sy ny mpanohitra amin`izao.
« Doublons » sy CIN sandoka Fa azo atao tsara ve izany ny mandika lalàna e ?
Famahana raharaham-pirenena « Mila mazava ny andraikitry ny CFM. »
Manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny izay toy ny taratra hahitana fifanolanana eo amin’ireo rafi-panjakana isan-karazany
Praiminisitra Ntsay Christian Nanome lesona ny mpanohitra
Tany tan-dalàna sy manaja ny demokrasia i Madagasikara ka mila manaja izany ny mpanao politika rehetra na olon-tsotra na andrimpanjakana maro samihafa.
Fifidianana hosoka “Ataovy ny fanadihadiana”
Taorian`ny fanambarana samihafa manakiana mafy ny fifidianana filoham-pirenena ka nilazan`ny filoha Rajoelina fa “izy no lany sy mpandresy” dia nanambara ny filohan`ny Antenimierandoholona,
Niasa tamina antontan-kevitra diso Tsy ho afa-bela ihany koa ny HCC
Na inona na inona resaka sy tatitra nataon'ny CENI dia tsy mba nanao fandinihana sy fikarohana lalina mihitsy ve ny HCC amin'ny maha mpitsara azy fa dia mionona amin'ny fandraisana taratasy nomena azy ?
Fitaovam-panamboarana ny kianja Barea Tonga ao Toamasina ny sambo sinoa…
Miantsona ao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina ilay sambo sinoa Xichanghai mitondra ireo fitaovana hanatontosana ny tetikasan'ny filoham-pirenena.
Hetsika X-Trême Combat andiany faha-3 Nisongadina ny mpikatroka Malagasy
Voaporofo tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina tamin’ny sabotsy 07 martsa 2020 lasa teo, fotoana nanatanterahana an’ilay hetsika :
Maison des jeunes Ankilifaly Toliara Nohavaozina sy nomena endrika vaovao
Notokanana tamin’ny 7 martsa 2020 teo ny asa fanavaozana natao tao amin’ny « Maison de jeunes Ankilifaly »
Tsy Krizy hoe ?
Mandalo ambaratonga efatra raha ny fanazavan’ny siantifika azy, ny fipoahana ady ao anaty fiarahamonina na firenena iray. Miandoha amina disadisa na ilay antsoina amin’ny teny frantsay hoe « turbulance » izany.
Fanavaozana ny lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany Tokony hidina ifotony ireo senatera, hoy i Rivo Rakotovao
Namerimberina ary nanamafy hatrany ny minisitry ny harena ankibon’ny tany fa tsy maintsy hiroso amin’ny fanavaozana ny lalàna
Faritra mpamokatra lavanila Anjakan’ny tsy fandriampahalemana
Mbola manjaka ny fangalarana lavanila amin’ireo faritra 8 mpamokatra eto Madagasikara, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian
Imerintsiatosika Lehilahy maty an-dalam-be tsy nisy mpahalala
Mitombo isa ireo olona maty an-dalana eto amintsika. Lehilahy iray manodidina ny 40 taona indray omaly alatsinainy 9 martsa no hitan’ny olona nitsirara teny an-dalana tao Imerintsiatosika.
Manakambahiny Tratra ambodiomby ilay mpamaky trano
Lehilahy iray no tra-tehaky ny polisin’ny boriborintany faharoa namaky trano tetsy Manakambahiny ny alahady teo tamin’ny 10 ora maraina.
EPP Anketa Toliara Ankizy 6 amin’ny 1.134 manana fahasembanana
Anisan’ny manahirana indrindra an’ireo ray aman-dreny manan-janaka manana fahasembanana ny mahita sekoly hianaran-janany. Misy ihany anefa ireo sekoly ambaratonga fototra miankina amin’ny fanjakana no manaiky handray azy ireny.